VPA နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း | FLEGT
VPA နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း/
ယနေ့အချိန်အထိ ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်၊ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ပေးမှုများတွင် စွမ်းဆောင်ရည် တည် ဆောက်ခြင်း၊ နည်းပညာအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး အကူအညီများပါဝင်ခဲ့ပြီး အကြို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အဆင့်များအတွင်း ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြားနေ EU ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးထားသည့် သစ်တောဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး (FLEGT) ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသူ၏ပါဝင်မှုမှ VPA လုပ်ငန်းစဉ် အများစုသည် အကျိုးခံစားခဲ့ကြရသည်။ ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသူသည် လုပ်ငန်းစဉ်အား ထောက်ပံ့ပြီး အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ထိထိရောက်ရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးကို ကူညီသေချာစေ ပါသည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ပြဿနာများအတွက်အဖြေများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် လည်းကူညီ ပေးပါသည်။ ယနေ့အချိန်အထိ EU သို့မဟုတ် EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှ ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသူကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေး သူသည်ကြားနေဖြစ်ပြီး EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ၂ ဖက်စလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး VPA ခိုင်မာလာ စေရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံမှအစိုးရသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သစ်နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့ အထူးကိစ္စရပ်များတွင် နောက်ထပ်အကူအညီများ လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များသည် မိတ်ဖက်နိုင်ငံရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ထောက်ပံပါသည်။ VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံတော်တော်များသည် VPA ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပွဲများနှင့်၊ သို့မဟုတ် VPA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အတွက် သွင်းအားစုများ ကို ခြေဆုံး၊ ခေါင်းဆုံးစဉ်းစားရန် နှင့် စီစဉ်ရန် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ထောက်ပံ့ပေးရေး အလှူရှင်နိုင်ငံများမှ အကူအညီများကိုတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ နှစ်ဖက်ပါဝင်သောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများတွင် အဆိုပါ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက်များသည် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံအား ကူညီပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ လက်ထောက် များသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက်လည်းအကူအညီပေးနိုင်သည်။ သာဓကအားဖြင့်
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အကြံပြုထည့်သွင်းချက်များသေချာစေရန် အလွှာစုံ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပါ၀င်နိုင်သည့်ချဉ်းကပ်နည်းများအတွက် အမျိုးသားအဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံကို ချမှတ်နိုင်ရန် အစိုးရအား အကူအညီပေးခြင်း
လိုအပ်သော စွမ်းရည်အား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
အချက်ကျသည့် အစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ စီစဉ်နိုင်ရန် အစိုးရအား စီမံခန့်ခွဲရေးအထောက်အပံ့များပေးခြင်း
နိုင်ငံတကာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ကူညီနိုင်မည့် ထောက်ပံ့ကြေးများပေးခြင်းနှင့် အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲပေးလေ့ရှိသည်။ ။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါ၀င်ခြင်း
သစ်တော အုပ်ချုပ်စီမံမှုအကြောင်းအရာများတွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း
အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် VPA လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
ဥရောပကော်မရှင်အပြင် အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ကူညီပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ။ ။
EU FLEGT Facility – 'EU FLEGT Facillity' အကွက်တွင်ကြည့်ပါ။
ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန
ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (FAO)
ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (Agence Française de Développement, AFD)
GIZ၊ ဂျာမန်ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့
ဆွီဒင် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အေဂျင်စီ (Sida)
UK နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန (DFID)
European Forest Institute မှဦးဆောင်စီစဉ်သည့် EU FLEGT Facility သည် သစ် တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများရှိ အစိုးရနှင့့် အခြားအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူအဖွဲ့များအား VPAs ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ထောက်ကူရန်နည်းပညာအကူအညီပေးပါသည်။ Facility သည်
FLEGT အပေါ် ဒေသတွင်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းရည်တည်ဆောက်ပေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် မျှဝေခြင်းကို ကူညီနိုင်သည်
စိတ်၀င်စားသည့် နိုင်ငံများအား FLEGT လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့် VPAs အကြောင်းကို အကြောင်းကြားပေးနိုင်သည်
VPA လုပ်ဆောင်မည်၊ မလုပ်ဆောင်မည်ကို စိတ်၀င်စားသည့်နိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသားအဆင့် စကားဝိုင်းများဖြစ်လာစေရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်များ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီများစသည့် VPA ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်များ ရှင်းလင်းနိုင်သည်
အခြားသော VPA လုပ်ငန်းစဉ်များမှ သင်ခန်းစာရယူပေးသည်
တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရန် နိုင်ငံများအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
VPA နှင့်သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံ့အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများကို VPA ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန် စီစဉ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
VPA တွင်ပြဌာန်းထားသည့် လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံစေရန် လိုအပ်သည့် စွမ်းရည်များကို ဆန်းစစ်ရာတွင် နိုင်ငံများကို ကူညီပေးနိုင်သည်
EU အခြေစိုက် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း EU အခြေစိုက်အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း အများအပြား ပါဝင်ပတ်သက်နေပါသည်။ NGOs များ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်ကဖန်တီးပေးသည့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်မည့်အခွင့်အရေး ကိုထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြု နိုင်ရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူ များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခိုင်မာစေခြင်း နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ အကြံပြုထောက်ခံ ဆွေးနွေးခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးရန် မူဝါဒဆိုင်ရာ သုတေသနများလုပ်ဆောင် ပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများရှိ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ အကြံပြုတိုက်တွန်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ကူညီပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ။ ။
သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားထောက်ပံ့ပေးသည့် အကျိုး အမြတ် မယူသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များမှလည်း အထောက်အပံ့များပေးကြသည်။ အထောက်အပံ့များအနက် သူတို့ သည် ဥရောပတင်သွင်းသူများအား VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေများကို နားလည်စေရန် ကူညီပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဥရောပတင်သွင်းသူများသည် တရားဝင်ပစ္စည်းများကိုသာ တင်သွင်းကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ၎င်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ မှာ
လူမှုအဖွဲ့အစည်းအခွင့်အရေးများကွန်ရက်သည် သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံတ ကာအရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်ဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်အများစုမှာ VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း နေသည့် သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်နေသည့်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်သည် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေရန် နှင့် မဟာဗျူဟာများချမှတ်ရန် ၂ နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံသည်။ ကွန်ရက်သည် တွေ့ရှိချက်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဥရောပကော်မရှင်နှင့် ဥရောပ ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များ ကိုတင်ပြပါသည်။
Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [အင်တာနက်မှ PDF ဖိုင်ကိုရယူရန်]